Musharax Daahir Shidane oo si adag uga soo-horjeestay qorshaha maamul u samaynta Gobollada Dhexe – Radio Daljir
Juunyo 3, 2015 10:08 b 0
Cadaado, 03, June, 2015 – Kilaaf xoogan ayaa hareeyey shirkii ka socday cadaado ee la doonayey in gobolladaas maamul loogu sameeyo, waxaana isla magaalada cadaado ka socda qaban qaabada shirweyne loogu magac daray shirki maamul u sameynta gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaasoo ay abaabulayaan siyaasiyiin iyo wax garad kasoo jeeda gobollada dhexe.
Daahir shidane Cabdi oo ka mid ahaa musharixiintii u taagnaa jagada madaxweynenimo ee maamulka Galgaduud iyo Koonfurta Mudug oo wareysi siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in magaalada Cadaado ay hadda ka socoto qabanqaabada shirweyne kale oo k waji duwan kii horay Cadaado uga socday. Musharax Daahir wuxuu hadalkiisa raaciyay in shirka Cadaado ka socda uu yahay mid ay Xamar kala timid Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya, islamarkaasna uusan wax dan ah u hayn bulshada ku dhaqan gobolladaas, sidaas darteed ay cadaado ku qabanayaan shir ay ku qancaan dhammaan beelaha halkaas ku dhaqan.
Daahir Shidane ayaa dhinaca waxa uu kasoo horjeestay hadallo dhawaan kasoo yeeray qaar kamida musharixiinta u tartamaya jagada madaxweynaha Maamulkaas, kuwaas oo sheegayey in maamulkaas loo sameynayo gobollada mudug iyo Galgaduud, wuxuuna arrintaas ku tilmaamay mid qalad ah oo ay soo alliftay dawladda federaalka soomaaliya, wuxuuna intaas ku daray inaysan dooneyn isku dhac iyo amni xumo ka dilaacda gobolka Mudug.
Hoos ka dhagayso waraysigii Musharax Daahir Shidane Cabdi